-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ် မန်းဝင်းခိုင်သန်းနှင့် ဂျပန်မ… – PVTV Myanmar
-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ် မန်းဝင်းခိုင်သန်းနှင့် ဂျပန်မ…
·9months ago ·32 Comments
-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ် မန်းဝင်းခိုင်သန်းနှင့် ဂျပန်မြန်မာပါလီမန် ချစ်ကြည်ရေးအဖွဲ့ တို့ အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်း
-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့၏ ပြည်သူနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ရေးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများ ဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့သတင်း
-မြန်မာ့အရေး အဖြေမရှာနိုင်ရင် အာဆီယံပါ ထိခိုက်လိမ့်မယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း ပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း အစရှိတဲ့ PVTV ရဲ့ နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Like – 5.3K Share – 516
2021-04-24 at 12:34 PM
So good 👍 thank you so much 👏👏👏
Cherry Lay says:
2021-04-24 at 12:36 PM
Junta’s airstrikes in Kachine & Karen States have caused ppl, including young children , pregnant women and elderly people to flee from their home.Please kindly protect all these people live by announcing “No Fly Zone In [email protected]*UN*
Cicada's Heart says:
2021-04-24 at 12:38 PM
Thway Sitt says:
Hsu Dawee says:
2021-04-24 at 12:40 PM
We always support NUG
Pyone Cho says:
2021-04-24 at 12:46 PM
Van Ceuceu says:
2021-04-24 at 12:50 PM
Moe Htet Myint says:
2021-04-24 at 12:56 PM
Khin Mi says:
2021-04-24 at 1:09 PM
2021-04-24 at 1:12 PM
We stand together CRPH trustfully
we trust and accept CRPHWe stand together CRPH trustfully
we trust and accept CRPH
2021-04-24 at 1:13 PM
2021-04-24 at 1:32 PM
War War War War says:
2021-04-24 at 1:59 PM
Daw Hla Hla Thein says:
2021-04-24 at 2:00 PM
Sai Naung Latt says:
San San Aye says:
2021-04-24 at 2:21 PM
ဦးစိန်ဝင်း အောင် says:
2021-04-24 at 3:10 PM
Wai Wai Nyunt says:
2021-04-24 at 3:18 PM
We support NUG. And thanks to U Kyaw Moe Htun for your effective words to urge ASEAN to make right decision.
2021-04-24 at 3:39 PM
Yuki Ne says:
2021-04-24 at 3:53 PM
အောင်မြင်ပါစေ ပြည်သူများ​၏ NUG
Hein Hein says:
2021-04-24 at 5:32 PM
NUG ဘဏ်အကောက်ဖွင့်ပြီး အလှူငွေရယူပါ
Yamin Kyaw says:
2021-04-24 at 6:57 PM
Page Photos Win says:
2021-04-24 at 9:26 PM
အာစီရန္ဟာျမန္မာျပည္အေရးကိုထိထိမိမိကိုင္တြယ္ေျဖရွင္ႏိွင္မယ္လို႔ မေမွ်ာ္မွန္းပါ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနမယ္ဆိုရင္အခ်ိန္ကာလၾကာရွည္စြာဆြဲထားခ်င္းႏွင့္တူ တယ္ခုခ်ိန္ဟာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရမဲ့ခ်ိန္ကာလေက်ာ္လြန္ေနပါၿပီ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔လိုလားေနပါၿပီ
Thin Thin Yee says:
2021-04-25 at 9:58 AM
သုသျှင် ဗညာနွဲ့ says:
2021-04-25 at 10:21 AM
မွန်မြန်မာစစ်ပွဲ နှစ်လေးဆယ်ကြာခဲ့တယ် ဒါပေမယ့် မုန်းလို့တိုက်နေကြတာမဟုတ်ပဲ ဘုရင်တွေ စစ်ကျော့ရင်း သူရဲကောင်းတွေကို ရွေးချယ်ပြီး ဂုဏ်ယူစစ်ကျော့နေကြတာ မွန်မြန်မာစစ်ပွဲမှာ လဂွန်းအိမ်နှင့် မင်းရဲကျော်စွာတို့ စစ်သရဲများအဖြစ် ကျော်ကြားခဲ့ကြတယ် သို့သော် သက်ဦးဆံပိုင်များ၏ ကြွားဝါလိုမှု့များကြောင့် မဟာသရဲကောင်းတို့ အလဟသ ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး နှစ်ဖက်စစ်ပန်းပြီး နယ်မြေတွေ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှောင့်နှေးခဲ့ကြရတယ်။
နွေဦးလည်း အချိန်ကြာလာရင် ပန်းလာကြမယ်
ဖွံ့ဖြိုးရေး စီးပွားရေး နွံနစ်လာလိမ့်မယ် ဒါကြောင့်
နွေးဦး တိုက်ပွဲ အားကုန်နွှဲလို့ အမြန်အောင်ပန်းယူရမယ်။
CRPHနှင့်NUGကို ပြည်သူက မျှော်နေတယ် တိုက်ပွဲဝင်ဖို့စောင့်နေတယ် လူကရှိတယ် လက်နက် စစ်ပညာ လိုတာပါ ။ လက်နက်အကူရရင် ဒီတစ်ပွဲ
အရေးတော်ပုံ အချိန်မဆွဲပဲ အမြန်အားထုပ်တိုက်ကြမယ်။ စကစ တပ်ပျက်လျှက် စိတ်ကစင့်ကလျား
Existence (April 24/2021)
We Must Win – Music Video (April 24/2021)